यस्तो हुन्छ आइतबार जन्मिएको मानिसको स्वभाव, आचरण र भविष्य ! जानी राखौ « Online Tv Nepal
यस्तो हुन्छ आइतबार जन्मिएको मानिसको स्वभाव, आचरण र भविष्य ! जानी राखौ
Published : 10 March, 2020 8:11 pm
मानिसको आफ्ना आफ्नै स्वभाव हुन्छन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार व्यक्ति कुन बार जन्मिएको हो त्यसमा पनि भर पर्ने बताउँछन् । आइतबार जन्मिएका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ त? हेर्नुहोस्:
आइतबार जन्मेका व्यक्ति सकारात्मक सोचका मालिक हुन्छन् र निकै विश्वसनीय हुन्छन् । आइतबार जन्मनेहरु अन्तर्मुखी हुने भएका कारण थोरै साथीहरु हुन्छन् । निकै संवेदनशील हुने भएका कारण तपाईंहरु कसैले भनेको कुरालाई धेरै दिनसम्म मनमा लिइ रहन्छन् । आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरुमा चिन्तन शक्ति निकै धेरै हुने भएका कारण लेखन अथवा वकालतको क्षेत्रमा हुनेछन् ।
तपाईंहरु अरुलाई सहयोग गर्न सधैँ तत्पर त हुनुहुन्छ नै तर तपाईंको चाँडै रिसाउने बानीले तपाईंले सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु तपाईंसँग रिसाउने गर्दछन् ।आइतबार जन्मेका व्यक्ति पैसावाल हुन्छन् र आफ्नो बलबुँतामा नै पैसा कमाउने कोसिस गर्नुहुन्छ । तपाईं कनै पनि कुरामा सम्झौता गर्नुहुन्न । तपाईं सौन्दर्यलाई मन पराउनुहुन्छ त्यसकारण आइतबार जन्मेका व्यक्तिहरु धेरै जसो प्रेम विवाह गर्ने गर्दछन् ।
तपाईंको रुपरंगमा तपाईंले आफूले आफैलाई भाग्यमानी नै सम्झनुपर्नेछ । तपाईं आफ्नो सम्बन्धलाई निकै सम्मान गर्नुहुन्छ त्यसकारण मानिसहरु तपाईंको झनक्क रिसाउने बानी भइकन पनि मानिससहरु तपाईंलाई छोड्न चाहन्नन् ।